News Collection: खुलेआम अश्लील चलचित्र निर्माण
खुलेआम अश्लील चलचित्र निर्माण
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ कति छ? यिनलाई थाहा छैन। गौतम बुद्ध कहाँ जन्मेका हुन्? यसबारेमा पनि यिनी अनविज्ञ छिन्। तर, ब्लू फिल्मबारे सोध्नुस् यिनलाई कण्ठस्थ छ। यिनी अर्थात् जिया केसी।
झापा घर भएकी जियाको पहिले नाम थियो जानकी। काठमाडौंमा प्रवेश भएपछि यिनी भइन् जिया। त्यसो त बाबुआमाले राखिदिएको आफ्नो नाममाथि गर्व नगर्ने अनि सिनेमा खेलाइदिने लोभमा निर्देशकरूपी परायाले दिएको नाममाथि गर्व गर्नेबाट अरू बढी के नै आशा गर्न सकिन्छ र? त्यसो त अब आफैंबाट पनि यिनले आशा मारिन् जस्तो छ, त्यसकारण पनि हेर्दा निकै शालीन, भद्र अनि भलाद्मी लाग्ने जिया यतिबेला भने बेग्लै ढङ्गले खुलेर प्रस्तुत हुन थालेकी छिन्। सिनेमामा यस्तो दृश्य दिन पनि उनी अब पछि नहट्ने रे। 'हो, कथाले माग्यो भने म बेडसिन दिन पनि तयार छु,' यसै भनिन् उनले। तर, बेडसिन कथा आफैंले माग्ने हो कि कथा लेख्ने लेखकले? त्यसमा भने उनी नाजवाफ भइन्।
चलचित्र एटीएमको यो दृश्यमा हेर्नुस् जियाले नायक दिनेश थापासँग टङ किस गरेको। कथाले कहाँ माग्नु यस्तो दृश्य? सुन्दा पनि अचम्म। किस अनि म्वाइँ वा चुम्नु भनेको माया दर्शाउने वा देखाउने प्रतीकात्मक हो तर यहाँ किस खानकै लागि फिल्म बनाएको र फिल्म खेल्नकै लागि किस खान दिएको जस्तो देखिन्छ। कहाँ छ यहाँ शालीनता अनि चुम्बन माया? यो दृश्य चलचित्रमा आठ मिनेट लामो छ भनिन्छ। यदि सेन्सर बोर्डले कैंची चलाएन भने यो दृश्य दर्शकहरूले एकाग्र भएर कसरी हेर्न सक्लान्?
नेपालको सेन्सर बोर्डलाई नै चुनौती दिँदै यस्ता सी गे्रडका सिनेमा निर्माणमा बाढी आउन थालेको छ। यसतर्फ समग्र चलचित्र उद्योग नै लागिपर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसरी यस्ता दृश्यको बजारमा आलोचना भइराख्दा पनि यस्तो दृश्य दिने जियालाई भने कुनै सङ्कोच र आपत्ति छैन। उनी भन्छिन्– यो त युवापुस्ताको माग हो।
'हामीले आधुनिक युवाको प्रतिनिधित्व गरेका हौँ' भन्ने जियालाई अर्को प्रश्न सोधियो– उसो भए एउटा बेडमा राति लोग्ने–स्वास्नीबीचको सम्बन्धलाई सडकमा ल्याउने? उनी फेरि नाजवाफ भइन्। युवाको प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै विकृति र विसङ्गति फैलाउने दृश्यहरूमा काम गरेर नाम कमाउने यिनीहरूको सपना पूरा नहुने देखिन्छ। नाम त चल्ला तर नकारात्मक तरिकाले। यो कुरा यिनीहरूले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।
जिया केसी दिनेश थापासँग यस्तो सिन दिन्छिन् तर कुन नायक कामुक लाग्छ भन्दा जवाफमा भने राजेश हमाल र सुमन सिंह भन्छिन्। उनले नीलो चलचित्र हेरेको कुरा पनि रामायण र महाभारत हेरेको भन्दा गर्व भएझैँ गरी बताइन् र भनिन्, 'ब्लु फिल्म हेर्दा मलाई काउकुती लाग्यो उ' यसैबीच यस्ता विकृति र विसङ्गति फैलाउने सिनेमाहरू निर्माण भइरहने क्रममा यस्तै अर्को एउटा सिनेमा बन्यो द लास्ट किस। नाम नै भल्गर प्रतीत हुने यो सिनेमालाई सेन्सर बोर्डले फेल गरिदिएपछि निर्माता टाउकोमा हात राख्न बाध्य भएका छन्। यसका लागि चलचित्र मात्र दोषी होइन बरु निर्माता, निर्देशक अनि कलाकार पनि त्यसका भागीदार हुन्। वास्तवमा यस्ता समूहलाई नेपाली सिने क्षेत्रले तिरस्कार नै गर्दा राम्रो होला कि?!